Hazvirevi kuti [Sosaiti parizvino isina zita] aigona kunge akaita chero chinhu kufanofungidzira mhando iyoyo yenyaya. Ndiri kushamisika zvechokwadi, zvakadaro, kuwanda kwemakambani asingaite zvakanyanya kushingairira kuzvidana mazita. Ndakaziva mabhizinesi akati wandei akashandisa tani yemari nemasangano ekushambadzira, chete kuti vaone kuti zita ravo raive nezvirevo zvakafanana pasirese, kana kunyangwe mune imwe indasitiri.
Imwe kambani yandaishanda nayo yakandipa basa rehupenyu hwekutsvaga rubatsiro. Dambudziko randaive naro nderekuti mhando yavo yaive yakafanana nechitoro chepamberi chepainternet mune imwe indasitiri. Nekuda kweizvozvo, pakave nekukanganisika nekukasira zvekuti vanhu vakatadza kuvawana online… kunyangwe vachinyora zita ravo rebhizinesi mumhedzisiro yekutsvaga.
Imwe kambani yandakabatsira ingadai yakatsvaga zvakapusa zveGoogle kuti vaone kuti zita ravo raive padhuze neresaiti isina kukodzera. Ivo vachiri kuunza pane tarisiro nyowani iyo isiri iyo inofara kuti vashandi vavo vanyora mune isiri URL.